ယ​နေ့အထိ လုပ်​​ဆောင်​နိုင်​ခြင်းမရှိ​သေးသည့် မီးပွိုင့်​... | CarsDB
ယ​နေ့အထိ လုပ်​​ဆောင်​နိုင်​ခြင်းမရှိ​သေးသည့် မီးပွိုင့်​များတွင်​ တပ်​ဆင်​ထား​သော ကင်​မရာများမှတ​ဆင့်​ စည်းကမ်းပျက်​ယာဉ်​များ ​စောင့်​ကြည့်​ ဖမ်းဆီးမည့်​ Control Center စနစ်​
ရန်​ကုန်​တိုင်း​အတွင်း မီးပွိုင့်​များတွင်​ တပ်​ဆင်​ထား​သော ကင်​မရာများမှတစ်​ဆင့်​ စည်းကမ်းပျက်​ယာဉ်​များကို ​စောင့်​ကြည့်​ ဖမ်းဆီးမည့်​ Control Center စနစ်​လုပ်​ငန်း လုပ်​​ဆောင်​ရန်​ အဆင်​သင့်​မဖြစ်​​သေးရာ ယ​နေ့အထိ ဖမ်းဆီးမှုများ လုပ်​​ဆောင်​နိုင်​ခြင်းမရှိ​သေး​ကြောင်း ရန်​ကုန်​တိုင်း​ဒေသကြီး အမှတ်​ (၂) ယာဉ်​ထိန်းရဲ တပ်​ဖွဲ့မှုးရုံးမှ သိရသည်။
ရန်​ကုန်​တိုင်း​အတွင်း ​မော်​​တော်​ယာဉ် သွားလာမှုများကို ထိန်းချုပ်​​စောင့်​ကြည့်​​ပြီး စည်းကမ်းပျက်​ကားများကို ဖမ်းဆီးအ​ရေးယူမည့် Control Center စနစ်​အား ပြီးခဲ့သော နိုဝင်​ဘာလအတွင်း ​လုပ်​ငန်းများပြန်လည်​ စတင်​လုပ်​​ဆောင်​​နေရာ အမြန်​ဆုံးပြီးစီး​အောင်​လုပ်​​ဆောင်​ရန်​ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ​ပြောကြားထားရှိ​ကြောင်း သိရသည်။
"Control Center စနစ်​က​ ယာဉ်​သွားလာမှု​တွေကို ထိန်းချုပ်​ဖို့ စမ်းသပ်​​နေပါတယ်​။ လုပ်​ရမယ့်​အပိုင်း​တွေက အများကြီးကျန်​နေ​သေးတယ်​။ ​မြေ​အောက်​ကြိုးစနစ်​​ ချိတ်​ဆက်​တဲ့အပိုင်း​တွေ ကျန်​​နေ​သေးတယ်​။ ဒီ​နေ့အထိ​တော့ မီးပွိုင့်​ကင်​မရာ​တွေက​နေ စည်းကမ်းပျက်​ကား​တွေ အ​ရေးယူတာ​မျိုး​ မလုပ်​နိုင်​​သေးပါဘူး။" ဟု ရန်​ကုန်​တိုင်း​ဒေသကြီး အမှတ်​ (၂) ယာဉ်​ထိန်းရဲ တပ်​ဖွဲ့မှုးရုံးမှ တာဝန်​ရှိအရာရှိတစ်​ဦးက ​ဆိုသည်​။
ရန်​ကုန်​မြို့ ယာဉ်​သွားလာမှုထိန်းချုပ်​​သော Traffic Control Center မှာ သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ပြီးစီးမှုမရှိသဖြင့် ကုမ္ပဏီထံမှ ဒဏ်ကြေးငွေ ကျပ် ၂၁ သန်းရရှိခဲ့​ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး စာရင်းစစ်ချုပ်၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ် အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားခဲ့သည်။ ယင်းအစီရင်ခံစာတွင် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ရန်ကုန်မြို့တော်၌ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု ရှင်းလင်းရန်အတွက် ခေတ်မီ မီး အချက်ပြစနစ် တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာ တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းအတွက် တင်ဒါ အောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီ Myanmar Shwe Ying International Co.,Ltd နှင့် China Railway 21st Bureau Group Co.,Ltd. (တရုတ်) နှင့်တန်ဖိုးကျပ် ၁၈ ဒသမ ၉၃၈ ဘီလျံဖြင့် စာချုပ်ချုပ်ဆို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးမှု မရှိသဖြင့် ဒဏ်ကြေးကျပ် ၂၁ သန်း ရရှိထားသော်လည်း လက်ရှိအချိန်တွင် ဒဏ်ကြေးဆက်လက် ပေးဆောင်ထားမှု မရှိခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းပြီးစီးမှုလည်း မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
ရနျကုနျတိုငျးအတှငျး မီးပှိုငျ့မြားတှငျ တပျဆငျထားသော ကငျမရာမြားမှတဈဆငျ့ စညျးကမျးပကျြယာဉျမြားကို စောငျ့ကွညျ့ ဖမျးဆီးမညျ့ Control Center စနဈလုပျငနျး လုပျဆောငျရနျ အဆငျသငျ့မဖွဈသေးရာ ယနအေ့ထိ ဖမျးဆီးမှုမြား လုပျဆောငျနိုငျခွငျးမရှိသေးကွောငျး ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး အမှတျ (၂) ယာဉျထိနျးရဲ တပျဖှဲ့မှုးရုံးမှ သိရသညျ။
ရနျကုနျတိုငျးအတှငျး မျောတျောယာဉျ သှားလာမှုမြားကို ထိနျးခြုပျစောငျ့ကွညျ့ပွီး စညျးကမျးပကျြကားမြားကို ဖမျးဆီးအရေးယူမညျ့ Control Center စနဈအား ပွီးခဲ့သော နိုဝငျဘာလအတှငျး လုပျငနျးမြားပွနျလညျ စတငျလုပျဆောငျနရော အမွနျဆုံးပွီးစီးအောငျလုပျဆောငျရနျ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး ဝနျကွီးခြုပျ ဦးဖွိုးမငျးသိနျးက ပွောကွားထားရှိကွောငျး သိရသညျ။
"Control Center စနဈက ယာဉျသှားလာမှုတှကေို ထိနျးခြုပျဖို့ စမျးသပျနပေါတယျ။ လုပျရမယျ့အပိုငျးတှကေ အမြားကွီးကနျြနသေေးတယျ။ မွအေောကျကွိုးစနဈ ခြိတျဆကျတဲ့အပိုငျးတှေ ကနျြနသေေးတယျ။ ဒီနအေ့ထိတော့ မီးပှိုငျ့ကငျမရာတှကေနေ စညျးကမျးပကျြကားတှေ အရေးယူတာမြိုး မလုပျနိုငျသေးပါဘူး။" ဟု ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး အမှတျ (၂) ယာဉျထိနျးရဲ တပျဖှဲ့မှုးရုံးမှ တာဝနျရှိအရာရှိတဈဦးက ဆိုသညျ။
ရနျကုနျမွို့ ယာဉျသှားလာမှုထိနျးခြုပျသော Traffic Control Center မှာ သတျမှတျခြိနျအတှငျး ပွီးစီးမှုမရှိသဖွငျ့ ကုမ်ပဏီထံမှ ဒဏျကွေးငှေ ကပျြ ၂၁ သနျးရရှိခဲ့ကွောငျး ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး စာရငျးစဈခြုပျ၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ်ဍာနှဈ အစီရငျခံစာတှငျ ဖျောပွထားခဲ့သညျ။ ယငျးအစီရငျခံစာတှငျ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှဈ ဘဏ်ဍာနှဈအတှငျး ရနျကုနျမွို့တျော၌ ယာဉျကွောပိတျဆို့မှု ရှငျးလငျးရနျအတှကျ ခတျေမီ မီး အခကျြပွစနဈ တပျဆငျခွငျးနှငျ့ ထိနျးခြုပျရေးစငျတာ တညျဆောကျခွငျး လုပျငနျးအတှကျ တငျဒါ အောငျမွငျသညျ့ ကုမ်ပဏီ Myanmar Shwe Ying International Co.,Ltd နှငျ့ China Railway 21st Bureau Group Co.,Ltd. (တရုတျ) နှငျ့တနျဖိုးကပျြ ၁၈ ဒသမ ၉၃၈ ဘီလြံဖွငျ့ စာခြုပျခြုပျဆို ဆောငျရှကျခဲ့ပွီး သတျမှတျခြိနျအတှငျး လုပျငနျးပွီးစီးမှု မရှိသဖွငျ့ ဒဏျကွေးကပျြ ၂၁ သနျး ရရှိထားသျောလညျး လကျရှိအခြိနျတှငျ ဒဏျကွေးဆကျလကျ ပေးဆောငျထားမှု မရှိခွငျးနှငျ့ လုပျငနျးပွီးစီးမှုလညျး မရှိသေးကွောငျး သိရသညျ။
Posted at: 09-01-2019 10:28 AM
Zawgyi Version ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစားပြောင်းလဲခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး...
Zawgyi Version စွမ်းဆောင်ရည် အဆုံးစွန်နဲ့ sport ကားတွေဟာ မော်တော်ကားထုတ်လုပ်မှုနယ်ပယ်ကို အရှိန်အဟုန်နဲ့ တိုးချဲ့နေတာပါ။...